DASSK and her government leaders dare to attend the Chinese New Year celebration but sad that they are too scared to attend Muslims’ functions. Just show their double standard of discrimination | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeDASSK and her government leaders dare to attend the Chinese New Year celebration but sad that they are too scared to attend Muslims’ functions. Just show their double standard of discrimination
DASSK and her government leaders dare to attend the Chinese New Year celebration but sad that they are too scared to attend Muslims’ functions. Just show their double standard of discrimination
DASSK and her government leaders dare to attend the Chinese New Year celebration but sad that they are too scared to attend Muslims’ functions. Just show their double standard of discrimination.
ခရစ်စမတ်ပွဲ ဒေဝါလီပွဲ အစုံတက်ပါ
Here in Malaysia, Muslims are majority but they show their love, care and respect with these kind of videos: MAS, PETRONAS, Tanaga National and numerous GLCs (Gov Linked Companies) and private companies Gov and opposition leaders greet and celebrate with their Chinese minority friends. For the Muslims of Myanmar, we are thirsty of these kind of understanding and friendship from our National leaders and opposition leaders. Instead we get the Ma Ba Tha’s hostile Islamophobic brickbats. In the previous years we were elated by former President Obamas’ Ramzan and Eid greetings but with the present racist Trump we have no hope. May be our beloved Holy Sees Pope and Revered Dalai Lama would kindly continue to greet us. Singapore PM, Thai Buddhist leaders, Canada PM and some British leaders are also kind enough to greet us.
Kamayut Media added4new photos.
ဒီကနေ့ကျရောက်တဲ့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအတွက် အထိမ်းအမှတ် နေ့လည်စာစားပွဲကို လူထုခေါင်းဆောင်က တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ နေပြည်တော် Park Royal ဟိုတယ်မှာ တည်းခင်းတဲ့ နေ့လည်စာစားပွဲကို လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံတမန်များအဖွဲ့ နာယက စင်္ကာပူသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ရောဘတ်ချွားက နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့လည်စာစားပွဲကို နိုင်ငံခြားသံရုံး ၃၆ရုံးက သံအမတ်ကြီးတွေ၊ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံတွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေက အကြီးအကဲတွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံ – မြန်မာအစိုးရ)
← ဗုံးကြဲလေယာဉ် (ကောင်းကင်ကို)
ဝီရသူ ဟာ ကြောက်စရာကောင်းသူ မဟုတ်သလို မူဆလင်တွေဟာလည်း ချစ်စရာ လွန်ကောင်းမှန်း သိလိုက်ရတယ်၊၊ ဒီလိုပဲ – ဆက်လက် – လက်တွဲ- ဆောင်ရွက်သွားရမယ်၊၊ ဘယ်လို အဟန့်တားတွေပဲ ရှိရှိပေါ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တွဲလက်မဖြုတ် နောက်မဆုတ်တမ်း ပေးဆပ်ကြပါစို့ ၊၊ ဦးပဉ္စင်း ဝီရသူ ( မစိုးရိမ် ) →
2 thoughts on “DASSK and her government leaders dare to attend the Chinese New Year celebration but sad that they are too scared to attend Muslims’ functions. Just show their double standard of discrimination”
တရုတ်ပွဲတက်တာ အန်တီ့ အပြစ်မဟုတ်ဘူး
ကုလားပွဲတွေ ဖျက်တာကို ထိုင်ကြည့်နေတာတော့
စစ်တပ်နဲ့ ပူးပေါင်းတာ အန်တီ့ အပြစ်မဟုတ်ဘူး
စစ်တပ်က ကျူးလွန်နေတဲ့ ဂျီနိုဆိုဒ် မှုတွေ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကို နှုတ်ဆိတ်နေတာတော့ အန်တီ့အပြစ် ဖြစ်သွားပြီ။ရထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုမှာ သွေးညှီ နံ့တွေ မွှန်ထူနေပြီ သတိလေးလည်းထားဦး။
အန်တီ့အကြိုက် မမြှောက်ပင့်လို့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူတော်တွေကို တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးမှာ ချပ်လှပ်ထားခဲ့တာကတော့ အန်တီ့ အပြစ်ဖြစ်သွားပြီ။
လူညံ့တွေ ကြောင့်တိုင်းပြည်ကို ပျက်စီးတော့မှာကို
သိလျက်နဲ့ လူတော်တွေနဲ့ ပြန်အစားမထိုးတာတော့
အသက်ကြီးလို့ မေ့တတ်တာ အန်တီ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး
အာဏာမရခင်က မကြာခဏ ပြောတတ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ရဲရဲတောက်အဆိုအမိန့်တွေကို
မှတ်တမ်းမှတ်ရာနှင့်တကွ သတိလည်လာအောင် ပြန်လည်တင်ပြပေးနေတာတောင်မှ အရူးကွက်နင်းပြီး
အတိတ်မေ့သလို ရွှေပျောက်သလို လုပ်နေတာတွေ
“နင်တို့က အသက် ၇၀ ကျော် အဖွားကြီးဆီက ဘာတွေမျှော်လင့်ထားတာလဲ”လို့ အန်တီ့သားသမီးတွေ
အငေါ်တူးပြီး မေးကြတာ အန်တီ့ အပြစ်မဟုတ်ဘူး
“အသက် ၇၀ ကျော်ပေမယ့်် ငါလုပ်နိုင်တယ်လို့
ငါအာဏာရူးခဲ့လို့ သူတို့ကြီးကြီးမားမား မျှော်လင့်နေတာပါ”လို့ အန်တီ့သားသမီးတွေကို လိမ့်ပတ်လည်
ကျွန်တော်တို့က အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားလည်း
ရရှိလာတဲ့ မရမဖြစ် ရဖို့လိုအပ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်
လုံးဝ ပစ်ပယ်လို့ မရတဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်မှုမရှိတဲ့ ဘာသာရေးပွဲတော်တွေကို အခြေခံဥပဒေမှာ အတိအလင်းထည့်သွင်းခွင့်ပြုထားတဲ့
ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ တောင်းဆိုနေရခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။
ခုတော့ ဘာသာရေးကိစ္စတိုင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ
ကဖျက်ယဖျက် လုပ်နေကြတဲ့ လူတစ်သိုက်ကို
အရေးမယူတဲ့ အပြင် ဘာသာရေးကျမ်းစာ
တွေကို လည်းစော်ကားသေး ဘာသာရေးပွဲတွေကိုလည်း နောက်ဆုတ်အလျှော့ ပေးခဲ့ရတဲ့ အထိ လွှတ်ပေးထားသေးတယ်ဆိုတော့ကာ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အထက်က လူတွေကိုပါ အလိုတူအလိုပါလို့ နိုင်ငံတကာက စွပ်စွဲ
ပြောဆိုနေကြပြီ။ကျွန်တော်တို့လည်း အိမ်ထဲက ကိစ္စကို အိမ်ပြင် မသယ်ချင်ပါဘူး ကိုယ့် အစိုးရဆီမှာပဲ သိုသိုသိပ်သိပ်လေး တောင်းဆိုလာကြရာက တဖြည်းဖြည်းနဲ့
အပြင်လူတွေ ရိပ်မိကုန်ပြီ။နောက်ဆုံး နိုင်ငံတကာက ဖိအားတွေပေး ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက လူများစုကလည်း
ကိုယ့်ကိုပဲလှိမ့်မဲ သူများတွေ ကိုယ့်အတွက် ပြောပေးနေတာကို ငြိမ်ပြီးမကန့်ကွက်ရကောင်းလားလို့ ပြန်မေးတဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင် အန်တီ့သားသမီးတွေကလည်း
နောင်မြိုချဖို့ ကြောက်အောင် ခါးသက်တဲ့ အရသာနဲ့
ဆေးခါးကြီး တစ်ခွက် လုပ်မပစ်ကြပါနဲ့ဗျာ။ပြည်သူတွေ ဒီမိုကရေစီကို ကြောက်တာဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အလားအလာမကောင်းနိုင်ဘူး ဆိုတာကိုအန်တီက ပိုသိမှာပေါ့။ဒီမိုကရေစီကို ကြောက်ရင် လက်နက်နဲ့ အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ စစ်တပ်နဲ့ နောက်ထပ်
အနှစ် ၆၀ ပြန်နေရလိမ့်မယ်။အဲဒီစစ်တပ်ဆိုတာ
အန်တီနဲ့ ခုသင့်မြတ်နေတဲ့ အန်တီ့ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျဉ်းချခဲ့တဲ့ လူယုတ်မာတွေရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဆိုတာကိုတော့ ပြန်ပြောပြဖို့ လိုမယ်မထင်ဘူး။
ကျွန်တော်တော့ မခေါ်ပါဘူး အန်တီ့ကို အဲ့ဒီ စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေ အန်တီ့ အဘိုးနာမည်တပ်ပြီး
ခေါ်နေခဲ့တာကြာပြီ အန်တီရေ ဘာစုဆိုလား။
ဒါပဲအန်တီရေ နေရတဲ့ ဘဝက ခြောက်ပူးတွေ
မတီး မမြည်ဆိုသလို ဖိနှိပ်မှုတွေအလိုမကျ မှုတွေကို
အပြင်မှာပြောခွင့်မရတော့ FB လိုနေရာကို ဟစ်တိုင်သဘောမျိုးနဲ့ စာရေးပြီး လာဖွင့်ချတာပါ။ရင်ထဲမှာ သိမ်းထားရတာတွေ များလွန်းလို့် ပွင့်ထွက်တော့မယ်။ဒီနေရာလည်း သိပ်လုံခြုံတာ မဟုတ်တော့ ထောင်နှုတ်ခမ်း တော့ နင်းထားရတာပေါ့။ပြောမယ်သာပြောရတာ